Ultrasonic Transducer, Ultrasonic Vibration Series, Ultrasonic Generator - Qianrong
Isixazululo Esikahle Sokusebenza Kwakho Kwe-Ultrasonic
Ngumkhiqizi wobuchwepheshe ocwaningweni lwe-ultrasonic, ukuthuthukiswa kwamandla amakhulu we-transducer nokukhiqizwa eChina
UBUHLE BOMHLABA WONKE
Sitholakala e-Hangzhou, eduze nesikhumulo sezindiza sase-shanghai, esinenqubomgomo ephelele yokuhamba nokusakazwa okulula. Emakethe yamazwe omhlaba, sinolwazi oluvuthiwe futhi oluzinzile kwezohwebo.
Ukugxilwa kwe-QRsonic ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwezakhi ze-ultrasonic kanye nokusetshenziswa. Le minyaka, imishini ye-QRsonic ithole idumela elihle kumakhasimende ethu eChina nasemakethe yomhlaba wonke.
I-QRsonic ingumkhiqizi ochwepheshe wazo zonke izinhlobo zedivayisi ye-ultrasonic. Singamukela i-OEM ne-ODM, sinikeze amakhasimende izixazululo eziphelele zesiphakamiso se-ultrasonic, ukuhlolwa kwesimiso, ukukhiqizwa kwezingxenye nokunye.
20Khz Ultrasonic ngokwezifiso zokushisela Uphondo nge A ...
High Frequency 20khz Ultrasonic Industrial homo ...
High Frequency 35Khz 1000w Ultrasonic Ukubekwa uphawu E ...
Ultrasonic yethusi Aluminium Ukuguqulwa 20Khz 300 ...
Nickel Mesh futhi Nickel Plate zokushisela ngu 3000w 2 ...
20Khz Ultrasonic Rubber Cutting Idivayisi nge 60m ...
20Khz 1500w Ultrasonic Welding Welding Transducer nge ...
15Khz 2600w High Power Ultrasonic zokushisela Oscil ...
Ephathekayo Ultrasonic transducer Impedance analyz ...
40Khz Ultrasonic Nano Futha Idivayisi nge-High Fr ...
Small Precision sishaye Umshini Scientific ...
35Khz Ultrasonic Spot zokushisela Machine nge Digi ...
Kumiselelwa Inaliti Yesiko Nokuthungwa Kwentambo ...
20Khz 2000w Ultrasonic Transducer Ukulekelela Assem ...
15 Khz Ultrasonic Welding Generator Transducer ...
Inikezela ngedivayisi yokusika ye-30Khz ye-Ultrasound ye-R ...